Nampiharihary ny fanjakan’i satana ny hazo fijaliana
"Ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon 'izay avy mandresy. " - Kol. 2:15.
Nifanatrika teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary ny fitiavana sy ny fitiavan-tena. Teo no fara-tampon'ny fisehoany. Tsy mivelona afa-tsy ho fampaherezana sy ho fitahiana Kristy ary raha namono Azy ho faty i Satana dia naneho ny haratsiany sy ny fankahalany an ' Andriamanitra. Nasehony mazava fa ny tena zava-kendreny teo amin'ny fikomiany dia ny hanongana an'Andriamanitra avy eo amin'ny seza fiandrianana sy handringana Ilay nanehoana ny fitiavan 'Andriamanitra.
Hita taratra koa ny fisainan'ny olombelona teo amin'ny fiainana sy ny fahafatesan'i Kristy. Handry eo amin'ny fihinanam-bilona ka hatrany amin'ny hazo fijaliana, dia antso ho amin'ny fampileferana ny tena sy ho amin'ny firaisan'ny olombelona izany. Nitondra ny fahamarinan'ny lanitra Jesosy ary izay rehetra nihaino ny feon'ny Fanahy Masina dia voatarika ho eo Aminy. Anisan'ny ao amin'ny fanjakan'i Satana izay manompo ny "izaho". Ny fihetsiky ny tsirairay amin'i Kristy dia hampiseho izay iandaniany. Koa noho izany dia samy mitsara tena ny isirairay.
Amin'ny andro fitsarana farany dia ho azon'ny fanahy very tsirairay ny anton'ny nandavan'ny tenany ny fahamarinana. Haseho ny hazo fijaliana, ka ho tsapan'ny saina rehetra izay nohamaizin'ny fandikan-dalana ny tena dikan'izany. Hijoro eo ambany fanamelohana ny mpanota raha manatri-maso an'i Kalvary sy Ilay nitondra zava-miafina nianjadian'ny fahoriana. Ho foana ny fialan-tsiny mandainga rehetra. Hiseho amin'ny toetrany maharikoriko ny fihetsika as eh on 'ny olombelona. Ho hitan'ny olona ny safidy nataony. Hazava amin'izany ny olana rehetra nitranga momba ny fahamarinana sy ny hevi-diso nandritra izay fifanoherana naharitra ela dia ela izay.Eo amin'ny fitsarana hataon'izao rehetra izao dia tsy hisy hanome tsiny an'Andriamanitra noho ny fisian'ny ratsy na ny nitohizan'izany. Haharihary fa tsy mba nankasitraka fahotana akory ny didim-pitsaran'ny lanitra, Tsy nisy tomika ny fitondrampanjakan'Andriamanitra, tsy nisy antony nahatonga fisaraham-bazana. Rehefa hiharihary ny fisainan'ny fo rehetra, dia hiray feo izay nahatoky sy izay nikomy hoe: "Mahitsy sy marina ny lalanao, ry Mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra? Iza no tsy hankalaza ny anaranao Tamp ô? ... Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao". - IFM, tt. 45-46.
Na dia noroahina sy tafasaraka tamin'ny lanitra aza ny tany dia nampifandraisin'i Jesôsy indray tamin'ny voninahiny. - ST, 24 Novambra 1887;